Umbono ngokomoya | sibubonile kunye neendlela, inkangeleko, iimpawu zomntu ngubani umbono ngokomoya
トップページ ＞ 言語 ＞ コーサ語 ＞ Umbono ngokomoya | sibubonile kunye neendlela, inkangeleko, iimpawu zomntu ngubani umbono ngokomoya
Umbono ngokomoya kunye nombono ngokomoya, ibonakalisa umfanekiso kwi ingqiqo izangoma, kuthiwa ukuba isenzo zokubona ilizwe ukuba kubonwa. Ingaba i-apreyizali umbono ngokomoya ukugqithisa ividiyo elicingelwayo kunye nomyalezo apho Umbuzo.
Indlela ukuze ubone umbono ngokomoya
imbonakalo umbono ngokomoya kukho umntu ngamnye, kodwa kwiimeko ezininzi ngokuthi, umzekelo, babe isiqingatha iliso okanye bavale amehlo abo, ividiyo kunye nomfanekiso kumva ijwabu kuqhelekile Utsushidasu kaThixo. Okanye uye wangena ulwazi kwezandi ngumntu, nokuba ukuba uvale amehlo akho Abanye abantu abakwazi umbono ngokomoya.
bunokubonwa embonweni ngokomoya, leyo wabona Ukubukela izinto e
imbono ngokomoya oomoya umlondolozi ekuso.
kubo bonke abantu baye baxelelwa ukuba kukho umoya umgcini womfundi, umoya umgcini ngokoqobo, lo moya ukuze ukukhusela wena, uye wakhuthaza umyalezo ekhokelela okulungileyo ngaphezu kobomi.
kwakhona zifakwe embonweni ngokomoya mazaziswe loo mntu thethwano ukufumana umyalezo (okanye nezaziwa njengemimoya umgcini dialogue).
thina aba ukungaqondi kakuhle, kodwa kakhulu yinto eyahlukileyo yokwenza dude olomeleleyo ezifana "umoya zingabonakala," "ghost abone." Xa ngaphandle
oomoya umgcini, elidlulileyo elizayo, ubomi edlulileyo (ubomi elidlulileyo) Abanye abantu bachitha kunye like.
kwakhona ukusebenzisa ubuchule ekuthiwa wokusiwa, kukho kwakhona iqela ubuchwepheshe ekhokelela iirekhodi Akashic kunye ephakamileyo.
wokusiwa, lajongana ijelo, ndawonye isenzo izinto, ezifana ezineqondo-ngumtshangatshangiso.
Akashic irekhodi kwaye, izinto ezifana museum-kwithala leencwadi ngaphambili, ngoku nakwixesha elizayo bonke abo abafumanekayo yonke indalo iye yabhalwa (kakade iliso, alibonakali ngeliso lenyama), besini esahlukileyo ukuba ukhathazekile ukusuka apho elidlulileyo okanye ngoku, okanye kokujonga elizayo, ungenza ndisikhuphe iinkcukacha, ezifana ngoku iimvakalelo.
I self ephezulu, kodwa kuthetha ukuba-high mbini wena ngokoqobo, yaye bathi ngakumbi kancinane lula ukuqonda, ndicinga ukuba ndiza ucinga wena xa imeko kakhulu. Xa
hamba kakuhle nokuba oko, ezifana umsebenzi kunye nothando liyaphumelela ngokupheleleyo, ndizenzele bakhe ngexesha karhulumente gidi.
kuba self eliphezulu akayi kuba nabani na, yi imboniselo nguMoya (nangokuqhuqha), kukhokelela umntu ephakamileyo, okanye ungakwazi ukufumana imiyalezo kunye neengcebiso kuwe-high ntathu.
kunye nemiyalezo evela kumgcini ngomoya-imbonakalo indlela, iirekhodi Akashic ngokugqithisela De, ufumana umyalezo ovela Higher Self, njl, i-apreyizali umbono ngokomoya ukuba xelela leMibuzo.
uphawu abantu abakwazi umbono ngokomoya Nokuba
umbono ngokomoya, kodwa likho nethuba lokuba bangabonelelwa unoluvo lokuba kubalulekile isegazini wazalwa, kukho kwakhona uluvo izangoma ukuba kunjalo ukuba umbono ngokomoya kuqeqesho ezifunyenweyo.
Kukho bobabini neembono, kodwa uluvo uninzi oluya kuba nako kuba iinzame ezifunyenwe xa nantoni na.
Kakade ke, shaman okanye umbingeleli, ezifana Utah kwaye itaconate, ngakumbi abantu abazalwa kunye wakhulela kwintsapho of oosiyazi kudla iphefumlelwe womelele, kodwa oko kudla lisikelelwe ubuchule ngokwemvelo, hhayi kuphela Oku akubonakali.
kukho umahluko ngamnye kakhulu izangoma ababuthathaka, okanye kuphela abantu babo bonke awuboni abantu uphawule izangoma, wonke umntu uya kuba ngakumbi okanye izangoma ngaphantsi.
On top of koko, ngubani na umbono ngokomoya Cinga ukuba uvela. (Kunokuba iinkonkxa, sinotyekelo ukwazi)
? iphefumlelwe naso ngabantu abanamandla
? oosiyazi entsapho wazalwa waza wakhulela abantu
? ethwele nabantu zoqeqesho ezifunyenwe
? ezifana amava kufutshane-ukufa (ukuba bodwa elunxwemeni yokufa kwingozi okanye ukugula), wamkele ngokuzithoba ngaphandle ingqiqo ikhethe nokungathembani nxamnye nabantu
? kamoya ukuba ukunxiba kwempefumlelo kumda ithuba lokuthile uya kungenisa ezifana loo mntu abantu
ukuba akanakuba umbono ngokomoya kwelinye icala, ngokungalunganga ichaphazela indlela embonweni lokomoya.
? 're ekutyeni kwaye nezongezelelo azithathi imveliso kuphela
? kusoloko ubunzima kwabanye uhlobo ntshikilelo
? akukho ndawo zendalo,
100% leyo uhlanjiweyo ngamaza umoya, ezifana zombane ekhaya izinto zonakale cishe akunakwenzeka ukuba kunjalo, kodwa eli mba sele kwakhona wathi asichaphazeli akulungile ukuba umbono imiphefumlo kunye izangoma.
ukuba ngathi kukuba le ndlela umbono
zokomoya njengoko na umbono ngokomoya, ukuze luzole phantsi umoya kwisiqingatha ubuliliso, njengokufunda umfanekiso ngasemva iinkophe, kuthiwa jikelele kwiindlela baye Ewe, kodwa indlela ukuya ngenxa yokuba umntu ngamnye, ngokuba Bengqiba ukufumana ukuze ungandixeleli into efana utitshala ofanelekileyo ndlela ilungileyo. Ukuba kukho oosiyazi
ezifana ekumazini eziqhelekileyo, uphulaphule ebantwini.
kwakhona izangoma owenza i-apreyizali mbono ngokomoya, hayi nje yena ubusebenza njengoko umdlali, okanye baye bathatha inxaxheba kwimisebenzi ukufundisa zocweyo kunye nezifundo, kunye nendlela umbono ngokomoya namagosa, njl into.
kuqala, ndiyakubongoza ukuba ukuxelela abantu lwenzeka, kukuba ukuqala ukusuka kwinto yokuba azame ukuxelisa esitratweni bathi, yeyona ndlela ilungileyo ukuze ukuba umbono ngokomoya.
ukuba emva umbono ngokomoya Nje ngokuba
umbono ezizezoMoya, isenzo zokubona ilizwe umzekelo, ngokubhekiselele ngokuba Ganoderma ukuze kubonwe wokugqibela. Ngoko ke, ukuba kukho naziphi na iingxaki, kuya kufuneka ibitheni.
? Ukuphila (Kukho Zininzi iintlobo ukuya yokuphilisa)
? iingcebiso ngokomoya
? ulungiso wave
? uhlengahlengiso aura
? umhlaba ngokuhlanjululwa
? zokuhlanjululwa yokwakha
- okanye Nonhlanhla ukuba indawo
imimoya emibi oomoya umgcini baba inedemon, okanye endaweni oomoya umgcini, kukho kwakhona ukuba iprakthishina, ezifana zokuqhawula umoya Toritsui isakhiwo efunekayo. Ezahlukeneyo kwakhona degree ngamnye nobunzima, kukho naye babuthathaka elungileyo oosiyazi.
ukuba, ukuba ufuna ukubuza oomoya ukujonga uluvo ingcali, kungekuphela nje amandla ukubona kwihlabathi lomoya, emva koko deal, kucetyiswa ukuba ukhethe izangoma kukho igama ukuba unyango ngokomoya.
Q & A ukusuka kwihlabathi
mbono ngokomoya yaye umoya ayibonakali ngeliso, ndicinga ndiyathandabuza zininzi. Apha ebiqaliswe Q & A ifomati pick up imibuzo ebuzwa rhoqo malunga umbono ngokomoya.
elizayo kwakhona izicwangciso ukongeza nangaliphi na ixesha.
ngokuba nokuxela ithamsanqa, oko kube kalukhuni zohlulwa ngokwendidi ezintathu zobomi-Bok-kwisigaba (nomtshana-I-do), umbono ngokomoya ihlelwa njengenxenye yam (kum).
ubomi manani, feng shui, ezifana ezokuqala nezokugqibela igama yomgwebo, ijonge ukwenza i ukuzivandlakanya kwedatha yeenkcukacha-manani.
koko ukufaka i
abaxeli-ukubalisa usebenzisa i wayephemfulelwe, ngokomoya.
isigaba ukufunda wesundu, ezifana ubuso isigaba, ngumntu kungokuvumisa besebenzisa izinto eziphathekayo, abaxeli-mathamsanqa ikhadi bhula kwakhona kwaye crystal zahlulwa apha.
reference | | hits kunye saziwa ukubuyekeza omoya lokwenene yefoni kungokuvumisa kukho sakho umsebenzi wakhe
ucatshulwe le theyibhile ukusuka kwiphepha site phezulu. Ngokuba apha kwakhona sivandlakanye somahluko ithamsanqa amabali kunye nombono ngokomoya, nceda ukuba kukho ixesha lakho.
1 uhlobo kwi ithamsanqa amabali iya kuba umbono ngokomoya. Nje kuba ufuna undinike uvavanyo umbono ngokomoya, njalo kufuneka silumke kuba abaxeli-mathamsanqa akuthethi kuba umbono ngokomoya.
kuyinto eqhelekileyo ukuba abuze izangoma ukuba isicelo umbono ngokomoya.
Noko ke, abanye abantu wayecela ezithile nangona abaxeli-mathamsanqa na izangoma, icebiso kumntu thethwano kunye nokuxela ithamsanqa kusetyenziswa iinkcukacha-manani kusetyenziswa iinkcukacha ezifana nomhla wokuzalwa ukongeza umbono ngokomoya ngenxa yokuba kukho kwakhona izangoma ngubani, i nganye makhe qinisekisa kakuhle phambi kokuba isicelo lwentsebenzo.
oosiyazi ithamsanqa-mathamsanqa yokuhlelwa zomsebenzi, ukususela indlela yahlulwe luyathandabuzeka kakhulu, ubuncinane enkulu kwenkcazelo khumbula, kucetyiswa hlola ngcono phambi lwentsebenzo.
Ukuthetha nokuxela ithamsanqa, mna ke izangoma yabantu ngubani nokuvumisa of (I), ngumntu ngubani umbono apreyizali ngokomoya.
umbono ngokomoya, yi ingqiqo wesithandathu izangoma, kodwa kuthiwa ubona amandla original ongabonakaliyo, umbono ongamandla ukubona izinto ingabonakali, kodwa kufuneka akwazi ukubona yokuqala.
uyakwazi ukuphila iwotshi enjalo yiloo nto ayenzayo kude, kodwa oko akuthethi ukufunda ngathi iimvakalelo. Imvakalelo kungenxa yokuba akukho jonga mnye ukuya iliso yokuqala. Ukongeza kwimbono
, kusenokuba kukho kubizwa ngokuba "ukubukela emgama", "ukubukela ekude," "clairvoyance".